Yenza isikhalazo, kodwa ungenzi nto: isiphelo seMartin Vrijland yoononwabo yokuzonwabisa: uMartin Vrijland
Kubonakala ngathi sizwana esicinga ukuba akukho nto iphosakeleyo kwihlabathi, kodwa xa ihla kuyo, sinqwenela ukwenza nto. Isenzo esisodwa esithathayo sisona sincoko esincinci ngexesha lokusela okanye i-barbecue yomakhelwane kwaye mhlawumbi sesashukunyiswa ukuba sizalise ukuvota, apho sivotela khona iqela elimele ukulila kwethu, kodwa ngaphandle koko akufanele ukukhohlisa. Sinqwenela ukwenza nantoni thina.
Ewe, sinokukrakra xa kuthinta isikhwama sethu okanye ukuba sibuhlungu kwiinkolelo zethu okanye kwimigaqo, kodwa ngenye indlela sicinga ukuba kulungile. Sithanda nje yonke loo miyalezo ekhulayo kwesikrini sethu kwaye sinomlutha wokukhaba kwe-endorphin xa omnye umyalezo ubonakala. Siphephelwa ngumlingo weskrini sethu se-i-Phone.
Ngokuqinisekileyo kukho nendawo eyenza into ethile. Ngoko unako ukuya 'kwindlu yeglasi' kwaye unikele ngeeyure ezimbalwa ngelixa uzityhalazela ngokupheleleyo. Omnye usebenza kumbutho okanye kwezopolitiko! Kanti omnye umntu ufumanisa yonke into ephosakeleyo ngento engalunganga kuluntu kodwa 'ukungaboni ngandlela-thile' okanye iqhinga. Ezi gurus unethemba phakathi kwethu becala bakholelwa ukuba baphumelela ngenxa yokuba abo ukukhalaza ngezinto engalunganga, kodwa uhlale nje ngaphantsi kwawo emagxeni kwaye yonke into eyenzekayo sigobe eyakhayo ukuze oku kukhokelela ngokuzenzekelayo kwimpumelelo. Kukho into ekuthethwa ngayo ngokuba neengqondo ezilungileyo, ngaphandle kokuba oku kuhambisane 'nokubeka intloko yakho entlabathi'.
Emva kweminyaka engaphezulu kwe-6 yokubhala nokuphindaphindiweyo ifuna inkxaso, kubonakala kucacile ukuba le ndawo ikhangisa uhlobo lwezokhenketho lweentlekele kubantu abafuna ukukhangela indlela ocinga ngayo ngokungafaniyo, kodwa oku kubonakala kungekho uhlobo lokuzonwabisa. Zonke i-swipe kwifowuni yakho kwakhona.
Sikulungele ukuhlawula i-Netflix kwaye sinokuthenga iphephandaba, kodwa ukuxhasa inqaku elibalulekileyo alifakiwe. Ewe; GeenStijl, kuba "ngumntu ohlekayo". Siphetha nokuba sondliwa ngento esiyathanda ukuyiva, njengoko izizukulwana ezidala ziphosa iincinci ezimbalwa kwiibhokisi zokuqokelela ngeyure yokuzonwabisa kwangoSasa ekuseni, ukuze bazive benamandla ngakumbi ngokholo lwabo. Ukuzilalisa ngokomoya ngokwamanye amajelo eendaba ngenye indlela efanelekileyo kwicawa yexesha elidlulileyo. Kwaye sinomdla wolwazi olungakumbi! I-TPO, iCafé Weltschmertz kunye neentlobo ezahlukeneyo zamehlo kunye nemibala. Kwaye bonke bakwazi ukuzisindisa? Akukho mntu uyazibuza ukuba oko kuza kuza njani.
Kakade ke kukho abambalwa abaxhasi abasisigxina beli sayithi kunye nabanye abantu abanamathuba amaninzi umnikelo omncinane kuyenza. Nangona kunjalo, ngokwenza oko kubonakala ngathi kuzo zonke iindwendwe zeendwendwe ngosuku (apho inani liphezulu ngaphezu kwekharityhulam elichazwe kwisayithi yangaphakathi). Akukho mntu uzimisele ukufumana ubulungu bosuku lwe-1 euro. Kubonakala ngathi siyona nto ibhetele kwaye sifuna nje ezimbalwa ukuhamba. Kwaphela, ihlabathi liyaqhubeka.
Emva kweeyure ngaphezu 24 kuvavanywa amanqaku zam kwelokulibala a paywall, oku kuye kwakhokelela 2 amalungu amatsha. Kubonakala ukuba abantu abafuni ukuchitha i-euro ye-1 ukufunda amaqaku akho! I-e-mail zibonisa ukuba abantu bacinga ukuba umzekelo ngcono emva counter nga ahlale AH, okoko nje amanqaku am, kodwa intshukumo online. Emva koko, ukuba ukubhala akuwona umsebenzi. "Loo leta nto nje yokuzonwabisa lazy ukuba wannabe ocinga apho ukufumana snabbel." Ngoko kubonakala kakhulu ngokungathi unayo yonke le minyaka, uJan waqala igama elifutshane kwaye unayo entanyeni ngaphandle. Kuba abantu abaninzi akunandaba nokuba unako okanye awukwazi ukuqhubeka. Kuphela yinto yokuzonwabisa yonk 'imihla.
Kwabanye, mhlawumbi banokuba nenzuzo, umzekelo, kodwa ukuba ngamanye amaxesha ubheka iphrofayili yabo ye-Facebook ukuba imnandi, ezinye izinto zibonakala zilungile. Ukufunda izicatshulwa ezibalulekileyo akufanelekanga. Sisebenzise ukuba sikwazi ukuyidla loo nto mahhala.
Kuphawu olucacileyo ukuba le sayithi inelungelo lokuba khona kubantu abanomdla kakhulu kulokho ubhalayo.
Ukususela ngoku, yonke into iyafumaneka kuphela kumalungu. Oku kunokwenzeka nakubantu abafuna ukuba lilungu le-1 ngosuku, kodwa ngoku ndifanele ndiqale ukucinga ngamathuba enu okusinda. Ukuba oku kunciphisa ukufundwa kwi-10% kuphela okanye nokuba yi-1% yintoni namhlanje, loo nto ayinandaba, kuba ayinandaba nomfundi. Kukho ngokucacileyo akukho xabiso kwiiyure ezininzi ngosuku lomzamo kunye nemihlatshelo oye kwafuneka uyenze phambi kwentamo yakho. Ngoko ke bonke abanye abafundi banako ukuthathwa njengolu hlobo abaphulaphuli ngokuzonwabisa. Kusindisa kuphela i-swipe ngosuku ngosuku lwe-Facebook. Ngoko ke kulungile kubo bonke abatyeleli beentlekele abathandayo ibali elincomekayo, kodwa abazange bathabathe kakhulu.
Urhulumente kunye nabezindaba bangasebenzisa ukukhwabanisa kunye nokukhohlisa kwaye bavuze oku ngentlawulo yeMacavelli
Ukuxilongwa kwengqondo ukuba siza kulahla iprogram yethu
Ukuzimelela ngokubaluleka kunobungozi obuninzi kunokuba i-Facebook icinge iindaba zobuxoki
Ukucingela inkohlakalo, uxinzelelo lwontanga kunye nokuthambekela kokulandela uluvo nokuziphatha kwesininzi
tags: amanqaku, nokuzonwabisa, eziziimbalasane, UMartin Vrijland, abatyeleli beentlekele
9 Agasti 2018 kwi-18: 38
Ukubhala into oyenzayo kungaphezulu kwezemidlalo ephezulu.
Kumdlalo ophezulu umvuzo uboniswe kwaye abadlali abafuna ukuhamba phezulu bahlala behamba kunye. Uluntu jikelele uyaqonda xa umdlali engazange enze phezulu kwaye uza kuthwala xa umdlali ephumelele. Bangaphi abadlali abaphambili abafumana ubomi babo ngemidlalo kwaye bangaphi abalobi (okwenene) abeendaba bemidiya abanokugcina iintloko zabo ngaphezu kwamanzi, ngaphandle kwe-AIVD kunye nabamkeli abancedayo, abasenayo ingeniso?
Njengombhali womzekelo "i-martinvrijland" awunayo nayiphi na inkxaso kunye nenkxaso (yemali) yabafundi ingaphantsi kwinqanaba lobukho. Ukongeza, usebenza yinkqubo, ukwenzela ukuba inxaxheba (ngendlela yomsebenzi) ayisona khetho. Awunakulindela nantoni na ebantwini, "abahlobo" kunye nabangaphambili ("zangaphambili") kunye noogqirha "njengentlanzi" kunye nomlobi, kuba ngokuqhelekileyo banokugcina isikhundla sabo kwinkqubo kwaye bayigcine. Abo babone isidingo ngokuqhelekileyo banqunyulwa ngokwabo kwinkqubo.
Ngenxa yobuninzi bobufundi, ukufunda amaqaku akho kubonakala kukuzonwabisa, kodwa kuthatha inyathelo ... ngelanga.
9 Agasti 2018 kwi-19: 42
Hi Martin! Uzame ukurejista nge-smartphone yami enefowuni. Isikhangeli sesiphequluli siphezulu, i-Kurtzweil isiphequluli nayo. Ukudideka ngokungena ngemvume, ukuhlaziywa kwiprofayili nokubuya kwakhona ... Ndiloyiko lokuba abantu abaninzi umyinge uya kwandisa ngakumbi.
Kubi kakhulu ukuba ufanele uthathe le milinganiselo kodwa uqonde ukuba awukho ukhetho. Isizathu sam esisisiseko sokuhlehliswa kwaba ukulandelelana (ukudluliselwa / ukugunyazwa) kodwa kuba akukho bucala ngasese: i-fukkit, ibe yilungu lelungu. Ngokuqinisekileyo ubuvila besizathu. Ndiza kuzama kamva ngePC.
Ndiyathemba ke, ukuba uya kuqhubeka nokubhala amanqaku apheleleyo afundwa ngabantu abangabhataleli ukuze ufikelele ekuvukeni abantu bahlale bakhulu kangangoko kunokwenzeka !!!!! Ndinentlonelo enkulu ngeengqiqo / ingqiqo yakho, ukuzinikezela kwakho kunye nento okumele uyilahle. Qhubeka ngokukhawuleza!
9 Agasti 2018 kwi-20: 53
Ndifumana loo myalezo kaninzi, kodwa ndivavanya inkqubo rhoqo kwaye ndivavanywe ngumakhi wesofthiwe.
Kungenzeka ukuba kufuneka uhlambulule ikhukhi kwisiphequluli sakho kwaye kufuneka ukwamkele iimeko ze-AVG okanye usebenzise isiphequluli esifanayo.
Kufuneka isebenze. Kuphela uxanduva lwezomthetho ludinga iimeko ze-AVG.
Guido ABANTU wabhala wathi:
9 Agasti 2018 kwi-21: 15
Nangona ndibhaliswe kwi-database yakho (njengomxhasi omncinci) Andizange ndifunde le ngcaciso malunga noWillie Dille. Njalo ikhosi efanayo: ubuyele ekupheleni.
Oku kuya kuba nethemba, ngokuba ndingathanda ukukukhuthaza ukuba ubhale ngokungakumbi.
Amanye amanqaku athi 'ukude-ukusuka kum-bhed-show' wethu waseBelgium ohlala kude neFransi.
Kodwa, qhubeka kwaye ungaboni, uthi umzekeliso omdala weFlemish.
9 Agasti 2018 kwi-22: 05
Ndijamelene neengxaki ezininzi zobugcisa kwiwebhusayithi yam. Oku kungenxa yezinto ezininzi.
Ngokomzekelo, ndibe neentlobo ezininzi zokuhlaselwa kweDDoS kwixesha elidlulileyo, ngoko i-database ihlala iphazamise kwaye iithebula zonakaliswe kwaye iplagin 'Restrict Content Pro' ayizange isebenze ngokufanelekileyo. Oku sele isisombululo sonke, kodwa i-plugin ye-Pronamic eyenza ukuba iintlawulo ziphinde zidibanise nelo phampani yangaphambili.
Ukuba konke kuhamba kakuhle, konke kusebenza ngoku ngoku (ndiyathemba).
Ndicinga ukuba ngoku kufuneka ufikelele kumanqaku.
Ndiyabulela inkxaso yakho kwaye ndiya kuqhubeka ndibhalela, kunjalo, kodwa abantu abayayixabisa ngokwenene.
10 Agasti 2018 kwi-00: 27
Ngenxa ngomnikelo onesisa ukusuka 1 umfundi lowo wamthabatha nje kude amaxhala zam zemali ngexesha lokugqibela ndagqiba amanqaku malunga ngokuzibulala gwenxa i-Hague PVV lebhunga Willie Dille ukuba stellen..omdat kufumaneka ngesisa kubalulekile ukuba abantu bayaqhubeka ukubona kwenzekani. Ndiyabulela loo mnikeli. Ndiyathemba ukuba abantu abaninzi baya kukhuthazwa ukuba babe ngamalungu. Yimisebenzi yexesha elipheleleyo kwaye indilahle yonke into.
10 Agasti 2018 kwi-09: 27
Ngaba neminye iminikelo kulo nyaka kwaye uqhubeka wenza oku njengoko uqhubeka ukubhala kwaye oku kuhlala kubakho abantu abaninzi. Lam ilizwi.
10 Agasti 2018 kwi-12: 14
Ndiyicinga ukuba kuya kuba yintlukwano.
Khangela, andinayo ixesha lokubhala incwadi, kuba ukusebenza kule bhulogi kungenza ndixakeke imini nobusuku. Ukuba ubungathenga incwadi kufuneka uhlawule.
Ngoko kubonakala kum kuhle ukuba ndihlala nje ndihlaziya iindaba ezininzi ezivulelekileyo kubo bonke abantu kwaye ukuba ndenza amanqaku athile angakumbi kumalungu kuphela.
Wim2 wabhala wathi:
10 Agasti 2018 kwi-09: 58
Kodwa ngaba uyazi ukuba yintoni ingxaki ekhokhwa kwiindawo zeendaba ezihlawulelwayo?
Kukho ezininzi (ezilungileyo), kwaye ukuba abantu kufuneka bahlawule ngokwahlukileyo kwiziko ngalinye, ngoko ke abantu abaninzi baba yinto ebiza kakhulu.
Iinjongo ezingasetyenziswayo kukudala idibaniselwano kunye nenani leendawo ezintle apho abantu bangahlawula khona kwaye bafikelele kuzo zonke iziza.
Kodwa thina baseDutch sinomlutha "wokukhulula" kunye "nokuphuhlisa".
Ukongezelela, ndiyakholwa ukuba ukuba sifuna ukuzisa utshintsho, kufuneka siphume kwilizwe ledijithali kwaye singene kwihlabathi elingokoqobo, umzekelo ngokuhlala kwiMalieveld imihla ngemihla ngamaqela amakhulu abantu, kuba oko kuthetha ukuthini.
Khangela oko kwenzeka ngenxa yokuguquka kweArabhu kuba abaninzi abantu (kodwa ngokubhekiselele kubonke abantu bangabantu abambalwa abantu) bahlala kwizikwere zesikhathi eside. Ngoku oko akuzange kwenziwe ngokufanelekileyo, kodwa kuye kwabangela utshintsho lokwenene.
Umbuzo njani ulungelelanisa into enje kwaye ukhuphe abantu ngaphandle kwendawo yabo yokuthuthuzela kwaye ubakhulule kwi-matrix?
Ndiyathemba ukuba uyaqhubeka nomsebenzi wakho omhle kwaye uyimfuneko.
"Utshintsho olukhulu (kwaye luya kuhlala luhlala lukhona) luziswa ngabantu abancinci."
K Capone wabhala wathi:
10 Agasti 2018 kwi-10: 20
Ndandisile ubulungu bam! ???? Uyakuxabisa kakhulu ... ukuba ndinezinto ezininzi zokuchitha kwixesha elizayo, ndiya kukucinga.
10 Agasti 2018 kwi-14: 38
Ndiyaqonda isenzo sakho, kodwa ngokunyanzeliswa kobulungu udlulisela umgomo wakho. Ufuna ukufikelela kubantu abaninzi ngangokunokwenzeka. Awuyi kwenza oko ngokubeka amanqaku akho emva kodonga lokuhlawula. Ndivele ndenze umnikelo kwaye ndafumanisa okusemandleni ukuba ndingakwazi ukufunda le ngcaciso malunga noWillie Dille ngokupheleleyo ngeli veki.
Kukho abantu abaziva bekhululekile kunye nawe kodwa bakufumanisa into ecasulayo ukuba unamathele kubulungu.
10 Agasti 2018 kwi-14: 49
Ewe kuyacaphukisa ukuba uhlawule isonka kwindawo yokubhaka okanye ubulungu bephephandaba okanye kufuneka uhlawule umrhumo wefowuni.
Xa uthenge incwadi uxhasa umbhali. Yintoni engalunganga ngokuba ilungu?
Andiyiboni ingxaki. Akukho mntu unokundinyanzela ukuba ndiqhubeke ndibhala ngelixa ndilahlekelwe yindlu kunye neendwendwe.
10 Agasti 2018 kwi-16: 20
Andikhathali ngemali, ngaphandle koko andinakukunika i-€ 100, kodwa konke malunga namaphepha akho avulwe ngayo amehlo akho afinyelele kubantu abaninzi ngangokunokwenzeka. Kwaye akusebenzi xa ubeka amanqaku emva kwedonga lokuhlawula. Ndifuna ukuba ilungu, kodwa kuphela ukuba amanqaku ahlala esidlangalaleni. Ndixhasa abantu abaninzi abazinikezele kuluntu, kodwa bahlala befikeleleka ngokukhululekile.
10 Agasti 2018 kwi-16: 45
Uxolo, kodwa ukwenza umnikelo akunikezi ilungelo lokumisela ukukhetha kwam.
Ndenza okufanayo nanamhla kakhulu, kwaye nakwiimidiya eziqhelekileyo, kukuthi wenze amanye amanqaku atholakalayo kumalungu kuphela.
Ndifuna nje isiseko esisisiseko sokufumana imali kwaye ivela kwii-euro ezilikhulu andinakuhlala unyaka wonke, nangona kunjalo ndiyabulela.
Ngaphandle kwesiseko esisigxina, awukwazi ukuqinisekisa izinto zakho ezibiziweyo. Ndibe sele ndilahlekelwa yi-165 ngenyanga. Kungenxa yokuba ndifuna ukucwangciswa kakhulu kunzima ngenxa yendlela enkulu yokuthutha kunye ne-DDoS esekelwe kwi-hardware-based based DDoS. Emva koko usenayo ielayisenisi zesoftware ezibiza imali rhoqo ngenyanga. Emva koko uxhumano lwe-intanethi, njalo njalo.
Ngamafutshane, ukwenzela ukuqinisekisa iindleko eziqhubekayo, kufuneka ube nengeniso eqhubekayo. Kungenxa yoko kubalulekile kwaye kuyimfuneko ukuba ndibuze abantu ukuba babe ngamalungu. Ngaphandle koko kufuneka ndiyeke ngokupheleleyo.
Ukuba umqeshi wakho ucela ukuba uze usebenze imihla ngemihla kwaye uthi kubalulekile ukuba uqhubeke ukwenza njalo, kodwa awufumani umvuzo, ngaba unokuhlawula irenti yakho kwaye uya kuhlala uhlala?
10 Agasti 2018 kwi-16: 54
Ukuba umgomo wakho ukufikelela abantu abaninzi ngangokunokwenzeka, kuya kufuneka wenze okuhlukile. Kodwa akufanele wenze nto kum! Ndizisola nje ngokuba ufuna ukukwenza ngale ndlela, kuba abantu abangaphantsi baya kufinyelelwa.
10 Agasti 2018 kwi-18: 25
Ndiyayiqonda, kodwa andinakukhetha ngaphandle kokuba abantu abaninzi banqume ukujoyina. Ngako oko ke kufikelela kumfundi nokuba ngaba azimisele ukuba ilungu. Oko kuxhomekeke kuyo yonke into.
inkcitho ekhohlakeleyo wabhala wathi:
12 Agasti 2018 kwi-13: 06
Ndicinga ukuba uhlawula kakhulu loo nto. Usuke unomncedisi onikezelweyo kunye nokukhuselwa kwe-DDos kwi-3 bucks ngenyanga kwaye ukusebenza emva kwewebhusayithi yakho kuncinci.
12 Agasti 2018 kwi-14: 07
Akulunganga kunye nemali ye-CPU kunye neGbits of memory ezifunekayo ukuze zithathele iingqungquthela zeendwendwe. Ngoko umncedisi uyaphuma kwaye awonakalise i-database.
Ingongoma ke ngoko ngamaphepha am ngamanye amaxesha ndivelisa ixabiso elikhulu kwi-1x xa izinto ezifana noRomy no-Savannah okanye u-Anne Faber zibandakanyeka. Oku ngamanye amaxesha kungenzeka ngokungazelelwe kwenzeka ngokungalindelekanga.
11 Agasti 2018 kwi-11: 44
Ungakwazi kwakhona ukuthumela isikrinta sokuprinta se-100 euro ukuze ndiyibeke apha njengobungqina, ngenxa yokuba ngenene ndilahlekile into. Ndiyakwazi ukufumana isixa, igama lakho, nayiphi enye idatha evela kuwe naphi na.
Kumnandi ukuba ngequbuliso yendlela abantu ukuba ukuntywila yasabela zange apha abafuna ukunika uluvo lokuba kukho into bavula, kodwa utayipha imigca embalwa wonke. Ukongeza isenzo kwigama yinto ehluke kakhulu.
11 Agasti 2018 kwi-17: 02
Ndiya kuthumela kuwe nge-imeyile. Ukutshintshwa kuvela kwi-29 uJanuwari ngencazelo; Gcina isibindi. Unokwenza uluntu, kodwa ngaba uyafuna ukukhupha inombolo yam akhawunti? Yaye yintoni e-akhawunti yam ayifuni ukuba umntu azi, ngoko nceda ungakhohlwa ukukhansela!
11 Agasti 2018 kwi-17: 55
Hayi ke ukungaqondi. Siyabonga nge-imeyili yakho.
Kwaye andiyikuyenza ibe yidlangalaleni.
Kwakhona iindleko zam zenyanga ziqhubekayo. Ukusingatha yedwa ngu-165 ngenyanga.
Kuya kuba mnandi ukuba abantu abaninzi bancedise imali encinci. Baninzi bancinci ..
Maurice Boon wabhala wathi:
10 Agasti 2018 kwi-15: 32
Ndicinga ukuba kunengqiqo ukuba usebenzisa udonga lokuhlawula kule ndawo. Ubhala izicatshulwa ezintle kwaye ndiyakuthanda ukuzifunda. Ikhuthaza ukuba ndicinge. Ndiyabulela loo nto. Iyintoni i-euro ye-2 ngenyanga? Le mali ayinanto yokuhlalutya kwakho. Yigcine!
10 Agasti 2018 kwi-15: 38
Ndiyabonga ngenkxaso yakho
11 Agasti 2018 kwi-18: 14
Oko lowu ngaphambili kwenye nqaku, oku kum uhlobo lwezifundo, bhala izinto ezibukhali kakhulu ezibalulekileyo ezifana ukuba kufunyanwa phantse naphi na enye alulawulwa ngurhulumente ezizimeleyo yaye unyanisekile, Akuse ukuya kwinqanaba . Kuhle ukuba ubone ukuba unamalungu amaninzi. Ngethemba abandezeleke apho kakhulu ukuba une amanqaku ngokubhala enzima kakhulu abantu bahambe phezu kweentloko zabo yaye abaphumi kuba ngokuya kodwa ngokuqinisekileyo ibe yakhe isekwimo hypnosis. Sinako wake up kodwa kufuneka sigcine amehlo ethu evulekile, ngenxa yokuba uya kuthi kwakhona ukusivumela kumajelo ezindala aqhelekileyo kunye groupthink. Kukho abantu abaneleyo ukufunda amaphepha akho ukuba kulungile ukuba unenani phakathi kwabo abafuna ubulungu ukuba baqhubeke befunda. Kufuneka wenze imali kule nkqubo ye-capitalist kwaye sele usenza umgudu owanako wokubhala. Kuba kum kubalulekile ukuba isayithi yakho eseleyo, kuba hlalani niphaphile ndifunde ukuba kubaluleke ngakumbi uze uhlale wena. Oku akusiyo ixesha lokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa, kodwa le ndawo ebhalwe phantsi kwesiDatshi iphhosa ihlabathi lam elidala lokucinga. Zonke ezo ndawo zemidiya yezinye iindawo azikho nje ngokubalulekileyo njengoko unjalo. Kwaye ngoko Idd nangoku ixutywa inyaniso ngobuxoki, kodwa nize ezizizo ngokunyaniseka lyrics.
11 Agasti 2018 kwi-20: 59
Ok, ngoku ndilungu. Ndiyathembisa ukuba negalelo kule webhsayithi engapheli emva kwodonga lokuhlawula, kuba abantu abaninzi kunokwenzeka banokuvuswa!
11 Agasti 2018 kwi-22: 21
Ndiyabonga. Ndiyathemba ukuba abantu abaninzi baya kuthatha isigqibo sokuba oko akunakulungelekile.
lizzy wabhala wathi:
14 Agasti 2018 kwi-09: 12
UMartin, namhlanje wazama amaxesha ambalwa ukuseka iqoqo. Awufuni ukuphumelela. Uhlala ecenga rhoqo xa zonke izinto zizaliswe kwaye ndicinezela irejista. Ngaba ke ukujika imizuzu ye-10 ngoko ndiyaphinda ndiyichukumise kwakhona. Kulungile, ndifuna ukuqhubeka ndifunda amanqaku akho, ndenze oko ixesha elide. Andizi into endiyenzayo ngoku. Ndingathanda ubulungu besilivere. Ngethemba ukuba olunye usuku luya kuphumelela. Lizzy
14 Agasti 2018 kwi-10: 27
Akusangazi ukuba inkqubo ayiyi kusebenza ngelixa umthengi weplagi evavanya kakhulu.
Kuphantse kubonakala sengathi i-eoa script ifakwe kwiservisi nge-hack okanye into.
Lewebhusayithi ibuye ihambe ngokukhawuleza ngosuku.
Kuba wonke umntu owenza oku: thumela i-imeyile yangasese.
« UWillilie Dille esemfanekisweni we1 ngosuku emva kokudlwengulwa kwakhe ngo-Arnoud van Doorn
Unqabile ukuhlamba i-lira yaseTurkey kunye nomdlalo we-chess: i-Erdogan, iirhafu ze-Trump kunye ne-bank yase-ING »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.322.284